Shah Rukh Khan: Labadii sano ee lasoo dhaafay dhowr jeer ayaa shaqada la iga eryay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Shah Rukh Khan: Labadii sano ee lasoo dhaafay dhowr jeer ayaa shaqada...
Shah Rukh Khan: Labadii sano ee lasoo dhaafay dhowr jeer ayaa shaqada la iga eryay
Shah Rukh Khan oo ah mid ka mid ah xiddigaha ugu waaweyn shirkadda filimada Hindiya ee Bollywood ayaa wareysi khaas ah oo uu siiyay BBC-da ku faahfaahiyay sababta ay sanadihii ugu dambeeyay filimadiisa u guuleysan waayeen, wuxuuna sheegay in dhowr jeer shaqada laga eryay.
Wuxuu sidoo kale wareysigaas oo ku baxay barnaamijka BBC-da ee Talking Movies(Filimada Hadla) uga hadlay waxa uu doonayo inuu dhaxalkiisa noqdo.
Shah Rukh Khan ayaa loo aqoonsan yahay inuu yahay nin taageero weyn ku leh guud ahaan dunida, waana mid ka mid ah xiddigaha filimada ee ugu caansan caalamka.
Waxaa magaciisa ku diiwaangashan ilaa 80 filim oo uu kasoo muuqday isagoo atoore ka ah.
Ilaa horaantii 1990-meeyadii, Shah Rukh Khan filimadiisa waxay ahaayeen kuwo la jecleysto, waxayna heer sare ka galayeen tartamada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba.
Laakiin dhowrkii sano ee ugu dambeysay filimo uu atoore ka ahaa xiddigan ayaa ku guul darreystay inay suuqa si fiican u galaan, qaarkoodna waxay noqdeen kuwo gabi ahaanba ku burburay shirkadda filimada qiimeysa ee Box Office-ka.
Image captionKhan ayaa sheegay in guushu ay u baahan tahay dulqaad iyo dadaal badan
Maxay tahay sababta ay filimadaadu dhulka u galeen?
Shah Rukh ayaa su’aashan uga jawaabay si cajiib ah, isagoo qiray in guusha iyo guuldarraduba ay qeyb ka yihiin howlaha.
“Shaqadan waxaan kusoo dhex jiray muddo aad u dheer, dadkuna xoogaa waxay mararka gaar la kulmayaan wax dhiba, sababtoo ah dhammaan filimada waxaan galineynaa dadaal badan, farxad iyo wanaag, laakiin waxaasoo dhan filim fiican kama soo baxayo, waa inaad sheegtid qiso fiican. Anigoo qaddarinaya dhammaan dadkii ku lug lahaa filimadeydii aan guuleysanin, aniga runtii waxaan aaminsanahay inaysan jirin sabab uu filim ku xumaan karo oo aan ahayn inaan qiso fiican sheegi waayay, taas ayaana ah sababta ay dhammaan filimadan u guul darreysteen”, ayuu yiri Khan.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dhowr jeer shaqada laga eryay labadii sano ee ugu dambeysay.
“Aniga dadka ayaan kusoo jiidaa filimka, haddii aanan qancin karin madaxdeyda waa la iga eryayaa shaqada, xitaa labadii sano ee lasoo dhaafay dhowr jeer ayaa la iga buriyay shaqada. Fursad ayey isiin doonaan mar kale, waan soo noqon doonaa, waana qancin doonaa”, ayuu yiri isagoo dhoollacaddeynaya.
Image captionShah Rukh Khan ayaa marti ku ahaa barnaamijka BBC-da ee Talking Movies(Filimada Hadla)
Mar la weydiiyay waxa uu dhaxal ahaan uga tagayo jiilka ka dambeeya ayuu yiri: “Waxaan jeclaan lahaa inaan gudbiyo dhaqanka ku saabsan in dadaal adag la sameeyo, oo aan la niyad jabin, wax walba oo adagna la wajaho islamarkaana uusan marnaba qofka isdareensiinin inuu dadaal badan sameynayo. Guushaada ka dhigo funaanad, balse haka dhiganin Jaakad”.
Mid ka mid ah filimadii ugu waaweynaa ee sida weyn ugu guuleystay Shah Rukh Khan waa Dilwale Dulhania Le Jayenge, wuxuuna markii uu wareysigan bixinayay sheegay in marnaba uusan filaneynin inuu filimkaas sidaas heersare u gaari doono.
Filimkaas caanka ah ayaa soo baxay sanadkii 1995-kii, waxaana ku wehlineysay atariishada caanka ah ee lagu magacaabo Kajol.
Previous articleMadaxweynaha Kenya oo Saldhigga ciidamada cirka ee ugu weyn Kenya ka furay Gaarisa
Next articleXil-ka-xayuubinta Donald Trump oo tallaabo weyn loo qaaday maanta
KASHIFAAD: Caqabad soo wajahdey in guddiga doorashooyinka hortago BF Soomaaliya
Dhageyso:-Maamulka Gobolka Sh/Hoose Oo Sheegay Inay Dileen Saraakiil Ka Tirsan Al-Shabaab
DAAWO:Hooyo Amran: Gabadhayda waxaa laba bil iga haysta ciidanka madaxtooyada
Goorta uu CC SHAKUUR ku laabanayo Muqdisho oo shaaca laga qaaday?
Dowlada Somalia oo digniin soo saartay & cabsi ka jirta gobolada dalka qaarkood (Akhriso)
KENYA daan-daansigeedu waa muuqdaye, anagaa is-dabaalisku nala fogaaday
Haweeney Ganacsata Aheyd Oo Lagu Dilay Degmada Kaaraan iyo warar shegaayo in ay….
Muxuu Faarax Macalin ka yiri Cabdi Hoosow, wasiirka howlaha guud ee DF?
Sawirro:-Duqa Muqdisho Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wafdi Ka Socda Dowladda Talyaaniga
DAAWO: Madaxweynaha Puntland Oo Kulan Deg deg Ah Is kugu yeeray Gudiga Amniga Gobalka Bari…..